Onye bụ Fred Harris, onye omenkà Ọstrelia a mara n'afọ 30? | Igbu egbugbu
Onye bụ Fred Harris, onye omenkà Ọstrelia a mara n'afọ 30?
O nwere ike ịbụ na ị ma aha ndị a ma ama nke egbugbu dị ka Sailor Jerry, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ha mara gị nke ọmaMana nke ahụ apụtaghị na ndị gbara ọchịchịrị, dịka Fred Harris, enweghị mmasị.
Dịka ị ga-ahụ n'isiokwu a raara nye onye omenka a na Australia, Fred Harris bụ mmadu na Sydney nke iri atọ, akụkọ mgbe ochie nke egbugbu ndị mmadụ dị ka Betty gbasaa.
1 Fred Harris na-egbu egbu
2 Sydney na 30s
Fred Harris na-egbu egbu
O nwere ike ịbụ Fred Harris amaghị na obere ụlọ ihe nkiri a ọ mepere na 1916 na Sussex Street na Sydney ga-aghọ akara egbugbu na kọntinent Australia. ruo ihe karịrị afọ iri atọ, mana ọ bụ otú ọ dị.
N'oge a, Mgbidi ahụ ejiri akara egbugbu mee site na ụlọ ihe nkiri Harris hụrụ ọtụtụ puku egbugbu, ọ dịkarịa ala ma ọ bụ ihe na-erughị ihe dị ka 2000 kwa afọ. Na agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi, ndị ahịa ya abụghị naanị ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, mana e nwekwara ndị na-agba ịnyịnya na ụmụ nwanyị (egbugbu kpakpando nke oge ahụ bụ ntụpọ!).
Sydney na 30s
Nzukọ Fred Harris na ọrụ ya na-enyekwa anyị ohere ịmata ihe otu Sydney nke 30s dị ezigbo peculiar: nke nwere egbugbu, ruo mgbe obere oge gara aga ụwa ala ma ewezuga isi.
SKnow mara na Fred Harris egbugbuola ọtụtụ atụmatụ dị iche iche, mana ejiji na-agbanwe ka oge ndị ahụ gbanwere. Dị ka ihe atụ, mgbe a na-ekwupụta Agha Worldwa nke Abụọ, atụmatụ ndị e ji ewu ewu n'abali ọ bụla bụ nke metụtara ịhụ mba n'anya na agha, dị ka ọkọlọtọ ma ọ bụ nọmba ọchịchị.
55 Gwa anyị, kedu ihe ị chere gbasara akụkọ onye ọsụ ụzọ a? Have nwere egbugbu ọ bụla onye omenkà a ma ama mere mere? Cheta na ị nwere ike ịgwa anyị ihe ị chọrọ, naanị ị ga-ahapụrịrị anyị ikwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Onye bụ Fred Harris, onye omenkà Ọstrelia a mara n'afọ 30?
Tattoo n'ike mmụọ nsọ nke agwa nke Tinkerbell
Okpokoro isi na okooko osisi, nchịkọta nke aghụghọ